မွေးထဲကချစ်မွှေးပါလာတဲ့ အင်္ဂါသားသမီးလေးတွေ အကြောင်း – Global News Myanmar
မွေးထဲကချစ်မွှေးပါလာတာ အင်္ဂါသားသမီးလေးတွေပါပဲနော် ။
တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ချစ်မိပြီဆိုရင်လည်း ဘယ်သူမှလိုက်မမှီအောင် ချစ်တတ်ကျတယ်ချစ်သူအတွက်ဆိုရင် ကောင်ကင်ကို ဒူးနဲ့တိုက်ရရ သူရဲကောင်းကြီးလုပ်ချင်တာ အဂါင်္သာသ္မီးတွေပါ .. ။
ဝမ်းနည်းလွယ်တယ်မျက်ရည်လွယ်တယ်ကီစ္စတစ်ခုကိုတစ်စိမ့်စိမ့်တွေးပြီးတော့တမြည့်မြည့် ခံစားနေတတ်ပြန်တယ် ။ဟာသပြောပြီး ပြုံးနေတတ်ပေမယ့်ရင်ထဲက ကြိတ်ငိုနေတတ်တယ်စိတ်နာအောင်တော့ သွားမလုပ်မိပါစေနဲ့ဒူးထောက်တောင်းပန်တောင် တစ်သက်လုံး ပြန်လှည့်မကြည်တတ်တော့ပါဘူး.. ။
သူတိုကိုသွားမကျောမိပါစေနဲ့ကိုး ဆယ်ဆလောက် ပြန်ချေ တတ်ကျလို့ပါမိသားစုအရေသိပ်ကံမကောင်းတတ်ကျပေမယ့်မိသားစုက အားကိုးရတဲ့ သားသ္မီးလေးတွေပါသဝန်တိုတတ်တယ် .. ။ပျော်ပျော်နေတတ်တယ်လူအများနဲ့ ဝိုင်းဖွဲ့နေရတာထက်တစ်ယောက်ထဲအေးဆေးနေရတာကို ပိုနှစ်သက်ကြတယ် .. ။
ဒေါသဖြစ်ရင် အပြင်မှာပေါက်ကွဲကြတာထက် ပါးစပ်က ပူညံပူညံနဲ့ရေရွတ်နေ တတ်ကြတယ် .. ။လူတွေအပေါ် ဖော်ရွေစွာနဲ့ခင်မင်တတ်ပါတယ် . ။ဝတ္တရားပျက်ကွက်မိရင်လည်းအပြန်ပြန်အလှန်လှန်တွေးပူနေတတ်ကြတယ် ။
မိသားစုတွေအပေါ်မှာ ပျော်ရွှင်မှုတွေပေးချင်တဲ့စိတ်တွေရှိကြတယ် ။တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးပေမဲ့တခါတလေမိသားစုထဲမှာ ပေါကြောင်ကြောင်နိုင်တတ်ကြတယ် ။
အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာသူများအပေါ်ဦးဆောင်လိုတဲ့စိတ်ရှိတယ် ကိုယ်လုပ်ရင် ကိုယ်အကောင်းလို့ထင်မြင်တတ်ကြတာအင်္ဂါ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လည်း ကြိုးစားတတ်ကြတယ် .. ။
အင်္ဂါတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတယ်တခါတရံ ကိုယ့်ကိုယ်ပင် ချီးမွမ်းတတ်တယ် သူများတွေမြှောက်ပေးရင်တော့သိပ်မကြိုက်ဘူး ။
ဒါတွေဟာ အင်္ဂါသားသ္မီးများပဲလို့ ပြောလိုက်ပါရစေ မှန်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်နဲ့နေ့နာမ်တူ အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက် ရှဲ ပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော် ။Crd
ေမြးထဲကခ်စ္ေမႊးပါလာတာ အဂၤါသားသမီးေလးေတြပါပဲေနာ္ ။
တစ္စုံတစ္ေယာက္ကို ခ်စ္မိၿပီဆိုရင္လည္း ဘယ္သူမွလိုက္မမွီေအာင္ ခ်စ္တတ္က်တယ္ခ်စ္သူအတြက္ဆိုရင္ ေကာင္ကင္ကို ဒူးနဲ႕တိုက္ရရ သူရဲေကာင္းႀကီးလုပ္ခ်င္တာ အဂါသၤာသၼီးေတြပါ .. ။
ဝမ္းနည္းလြယ္တယ္မ်က္ရည္လြယ္တယ္ကီစၥတစ္ခုကိုတစ္စိမ့္စိမ့္ေတြးၿပီးေတာ့တျမည့္ျမည့္ ခံစားေနတတ္ျပန္တယ္ ။ဟာသေျပာၿပီး ၿပဳံးေနတတ္ေပမယ့္ရင္ထဲက ႀကိတ္ငိုေနတတ္တယ္စိတ္နာေအာင္ေတာ့ သြားမလုပ္မိပါေစနဲ႕ဒူးေထာက္ေတာင္းပန္ေတာင္ တစ္သက္လုံး ျပန္လွည့္မၾကည္တတ္ေတာ့ပါဘူး.. ။
သူတိုကိုသြားမေက်ာမိပါေစနဲ႕ကိုး ဆယ္ဆေလာက္ ျပန္ေခ် တတ္က်လိဳ႕ပါမိသားစုအေရသိပ္ကံမေကာင္းတတ္က်ေပမယ့္မိသားစုက အားကိုးရတဲ့ သားသၼီးေလးေတြပါသဝန္တိုတတ္တယ္ .. ။ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္တယ္လူအမ်ားနဲ႕ ဝိုင္းဖြဲ႕ေနရတာထက္တစ္ေယာက္ထဲေအးေဆးေနရတာကို ပိုႏွစ္သက္ၾကတယ္ .. ။
ေဒါသျဖစ္ရင္ အျပင္မွာေပါက္ကြဲၾကတာထက္ ပါးစပ္က ပူညံပူညံနဲ႕ေရ႐ြတ္ေန တတ္ၾကတယ္ .. ။လူေတြအေပၚ ေဖာ္ေ႐ြစြာနဲ႕ခင္မင္တတ္ပါတယ္ . ။ဝတၱရားပ်က္ကြက္မိရင္လည္းအျပန္ျပန္အလွန္လွန္ေတြးပူေနတတ္ၾကတယ္ ။
မိသားစုေတြအေပၚမွာ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြေပးခ်င္တဲ့စိတ္ေတြရွိၾကတယ္ ။တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းတဲ့ပုံစံမ်ိဳးေပမဲ့တခါတေလမိသားစုထဲမွာ ေပါေၾကာင္ေၾကာင္နိုင္တတ္ၾကတယ္ ။
အလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာသူမ်ားအေပၚဦးေဆာင္လိုတဲ့စိတ္ရွိတယ္ ကိုယ္လုပ္ရင္ ကိုယ္အေကာင္းလို႔ထင္ျမင္တတ္ၾကတာအဂၤါ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္လည္း ႀကိဳးစားတတ္ၾကတယ္ .. ။
အဂၤါေတြဟာ ကိုယ့္ကိုယုံၾကည္မႈအျပည့္အဝရွိတယ္တခါတရံ ကိုယ့္ကိုယ္ပင္ ခ်ီးမြမ္းတတ္တယ္ သူမ်ားေတြျမႇောက္ေပးရင္ေတာ့သိပ္မႀကိဳက္ဘူး ။
ဒါေတြဟာ အဂၤါသားသၼီးမ်ားပဲလို႔ ေျပာလိုက္ပါရေစ မွန္တယ္ဆိုရင္ ကိုယ္နဲ႕ေန႕နာမ္တူ အဂၤါသားသမီးေတြအတြက္ ရွဲ ေပးဖို႔ မေမ့ပါနဲ႕ေနာ္ ။Crd
Previous Article “အရိုးကျိုးအရိုးဆက်ဒဏ် အရှင်းပျောက်ပြီး ထုံကျဉ်ကိုက်ခဲပျောက်တဲ့ မြန်မာ့ဆေးနည်”
Next Article လေထိုး လေအောင့် နှင့် အစာအိမ္နာ အတွက် ကြက်မောက်ဆူးပြန် (သို့) ကျွဲနှာခေါင်းချိတ်ပင်